Ndị njem UAE jikọtara Thailand, Malaysia na Indonesia n'afọ a
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị njem UAE jikọtara Thailand, Malaysia na Indonesia n'afọ a
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Resorts • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
South East Asia bụ ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ maka ndị njem UAE, dị ka akụkọ ọhụrụ na-ewu ewu wepụtara taa site na ntanetị na ntanetị na ntinye akwụkwọ nkwari akụ na Dubai.
Site na ọdịbendị ya na ndụ n'okporo ámá ya, Bangkok na-ebute ụzọ ntinye akwụkwọ ụgbọ elu na 164% na 2018, nke a na-esochi ya na paradaịs paradise paradise na Bali, ihe ruru 150% n'otu oge ahụ. Ọpụpụ ọpụpụ na Kuala Lumpur dị ike na skyscrapers na-enwu gbaa na n'okporo ámá ndị a na-eri nri ejirila 130% megide 2018.
Ọdịmma ndịda nke South East Asia na-akwado ụdị omume afọ a nke ndị bi na UAE na-ahọrọ ịga mba ofesi karịa ezumike obodo maka ezumike ha. Ntinye akwụkwọ nkwari akụ mba ụwa abawanyewo na 74% afọ a site na 45% na 2018 ebe ebe obibi ụlọ jụrụ 26% na 55% afọ gara aga. -Lọ nkwari akụ dị n'etiti na ụlọ elu nwere kpakpando anọ abawanyela na ewu ewu na ndị ibe ha okomoko dịka ndị njem na-achọ ahụmịhe ziri ezi na obodo n'ofe ụwa.
N'ịbiaru ụlọ, Istanbul na akụkọ ihe mere eme ya na ntụrụndụ na-atọ ụtọ na-ejide ọnọdụ ya dị ka otu n'ime ebe ndị njem UAE na njem South Caucasus na-aga n'ihu na-eto eto na ndị na-achọ ọdịbendị na ndị njem n'èzí na-aga Baku na Azerbaijan.
Omume nke ọtụtụ obere ezumike na-agbadata, ebe ndị bi na UAE na-ewe ogologo oge ezumike na mba ofesi. Ogologo oge ịnọ nke dabere na data ntinye akwụkwọ ụgbọ elu ejirila 70% gaa ụbọchị 17, ebe ndị njem na-ele anya ọzọ iji chọpụta ọdịbendị na ọnọdụ dịgasị iche iche. Ọtụtụ na-enwetakwa ego maka ezumike ọha na eze toro ogologo na 2019 iji mee ka oge ezumike ha nwee ike.
Ọnụ ọgụgụ nke otu na-arịwanye elu na 2019, ihe ruru 15% na 2018 ka ọtụtụ ezinụlọ na ndị enyi gbanahụrụ oge oyi.
Ulo oru ntanetị ugbu a na-ebukwa ụzọ na-eduga ngwa maka ngwa mkpanaka maka ndị njem na-edebanye njem ha, na-enwekwu ndokwa maka oge nri ehihie na-arụ ọrụ karịa ka ha na-aga. Site na ahụmịhe nke ngwa na websaịtị na-agagharị na-adịwanye agbanwe agbanwe, ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụzọ ha kachasị dị mfe, kachasị ọsọ ma dị mfe iji dọọ akwụkwọ.